Toriteny Alahady 17 Jolay 2016 | FJKM Amboniloha
Toriteny Alahady 17 Jolay 2016
Nehemia 6, 1-9 ; Jaona 4, 31 – 38 ; I Koritiana 12, 27 – 28
Fotoana nikasan’i Nehemia hanorina ny tanàna efa rava sy hanorina indray ny Tempoly tamin’ny andron’i Nehemia . 2 lahy no niaraka tamin’izany dia Ezra niandraikitra ny amin’ny fanitsiana ny olona ny amin’ny fivavahana fa Nehemia kosa nandamina ny fiaraha-monina.
Toetra 3 no ampianarin’Andriamanitra antsika ato anatin’izao toriteny izao.
Toetra 1 : Mila fahavitriana lehibe raha te hahatanteraka asa
Nahazo tso-drano tamin’ny mpanjaka Nehemia vao afaka nanangana ny rava .
Tsara ny manana hafanam-po eo am-panaovana asa saingy mila fahaiza –mandamina izany . Eo am-piatrehana ny asa dia takiana amin’ny mpiasa ny fahavitriana lehibe satria tsy maintsy misy ny fahavalo sy ny sakana amin’ny endriny maro samihafa. Halavirina ny fahakiviana , ary aoka tsy ho tazan’ny olona eny amin’ny mpiasa mihitsy izany hoe endrika kivy izany . Ny paik’ady atolotra dia asiana zavatra mijoro araka ny laharam-pahamehana mba hampahavitrika ny malemy finoana ary koa hahatonga saina ireo manenjika. Izany anefa dia asa atao misy kalitao fa tsy ho kitoatoa fa ny hatsaran’ny asa vitanao no handrefesana ny faharisianao teo am-panatanterahana ny asa.
Toetra 2 : Mila manana vina na fijery lavitra
Raha ny an’i Nehemia dia tao anaty vinan’asa ny hanorenana ny manda ; trano fivavahana, tempoly. Mazava tsara ny lalana ary tsy miverimberina. Na iza na iza mpitondra mifandimby, misy foana koa ny sakana sy ny fitapitaka (and 2 –5) saingy tsy nataony hampiova ny tanjona izany .
Ny olona manana vina amin’ny asa atao dia tsy mihemotra manolona ny zava-tsarotra ( jereo ny dingana nodiavin’i Jesoa Kristy manoloana ny asam-pamonjena). Ny vina ombam-paharisihana dia manjary zezika hanasoa ny hafa , fa ny asa tsy misy vina dia lavitry ny faharisihana ka manjary fako manamaimbo ny hafa.
Toetra 3 : Vavaka mitohy
Ny asa lehibe tanterahina dia tsy sarahina amin’ny vavaka. Fanafodin’ny fahakiviana sy ny fisalasalana, fanalahidin’ny faharetana ny vavaka. Tsy maintsy misy ny olana saingy toe-tsaina atolotra ny Kristiana ny tsy mijanona na hihemotra manoloana ny sakana. Asa ataon’ny Kristiana ny vavaka, ary mila mivavaka tsy tapaka ny Kristiana eo am-panaovana ny asa.
Vokany : vitan’i Nehemia tao anatin’ny 52 andro ny fanorenana ny manda
Tsy afa – misaraka amin’ny Kristiana mpiara –miasa amin’ny Tompo eo am-panaovana ny asa : ny vina omban’ny fahavitriana izay miankiana feno amin’ny vavaka .
Eo amin’ny asa lehibe ankinin’ny Tompo amintsika , fako ve aho sa zezika manolona ny sakana izay tsy maintsy ihoarana ?
ANDRIAMAMPIANINA Zaka , Mpitandrina FJKM Tanjombato
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 18 juillet 2016